Anụmanụ nke Triassic: Invertebrates, dinosaurs and reptiles | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime oge nke Mesozoic Enweela oge 3 nke gosipụtara ọdịiche dị na mgbanwe nke ụwa anyị: Triassic, Jurassic y Ugbala. Na akara nkewa nke dị adị tupu oge Triassic, Permian, usoro mkpochapu otutu mmadu mere na onodu uwa nke mere ka 95% nke umu ihe nile di ndu wepu. Nke a mere fauna Triassic na-anọchi anya ihe nrụgharị na ndụ niile dị na mbara ala. Umu anumanu ole na ole lanariri usoro mkpochapu mmadu a aghaghi imeghari onodu ohuru na ala.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere ya Anụmanụ Triassic.
1 Mmepe nke osisi Triassic
2 Mmepe nke Triassic fauna
2.1 Anụmanụ Triassic Terrestrial
2.1.1 Anụ ndị na-akpụ akpụ ụmụ anụmanụ
2.2 Triasic dinosaurs
2.2.2 Ihe akuko
2.3 Aquatic Triassic anụmanụ
Mmepe nke osisi Triassic
N'agbanyeghi usoro mkpochapu nke a na mbara ala, enwere otutu umu ndi nwere ike imeghari na ndu ndi ohuru, nke nta nke nta, ka oge na-aga ha di iche. N'ime oge a niile, osisi kpụrụ oke ọhịa ma ọ bụ dinosaurs malitere ịkpa ụwa. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ anụmanụ na-achịkwa ebe niile dị ugbu a, ma ala, ikuku ma oke osimiri.
Anyị ga-eme nkenke nyocha banyere mmepe nke ahịhịa na oge a. Na mbido Triassic, ọtụtụ osisi lara n’iyi kemgbe Ọnọdụ gburugburu ebe obibi abụghị nke kachasị ha mma iji zụlite ma gbasaa n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Nke a bụ ihe kpatara na osisi ndị nwere ike ijigide onwe ha mgbe oge mbibi a gachara nwere ike ịgbasa ngwa ngwa ebe ọ bụ na ogo asọmpi dị obere. Osisi enwere ike idozi ma megharia ya di otutu bu nke ndi otu egwuregwu.
A maara osisi ndị a dị ka osisi ndị na-enweghị mkpụrụ. N'ime otu osisi a, conifers na cycads pụtara. Ndị nnọchi anya genus gingko na fern dịkwa ezigbo mkpa. Conifers nọchitere otu ìgwè osisi ndị ahụ na ihe omumu osisi, nke siri ike ma na-eguzogide ọgwụ. Akwụkwọ ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nke a na - eme ka akụkụ ahụ ha, ma nwoke ma nwanyị, mgbe ha na-amụpụta, dị n'otu nwoke.
N'aka nke ọzọ, cycads bụ osisi ndị nwere osisi nwere osisi na-enweghị ụdị alaka ọ bụla. Akwụkwọ ya dị na njedebe ahịhịa nke ahịhịa ma dị njọ. Nke a putara na enwere ndi nwoke na nwanyi di iche. Gingko bara ụba na oge a naanị ụdị Gingko biloba na-ebi taa. N'ikpeazụ, fern bụ osisi vaskụla nke ndị otu pteridophytes na-enwe phloem na xylem.
Mmepe nke Triassic fauna
Ndị na-anọchite anya ụmụ anụmanụ n'oge a bụ otu abụọ: ihe na-akpụ akpụ na dinosaurs. Ọ bụ invertebrates bụ ndị nwere ike nweta ukwuu mmepe na larịị nke aquatic e kere eke. Fọdụ ụdị ihe na-akpụ akpụ na-etolitekwa na gburugburu mmiri ma nwee ike ịchịkwa ọtụtụ oke osimiri.
Banyere ikuku, a malitere ịhụ ụfọdụ anụ na-akpụ akpụ nke nwere ụfọdụ mgbanwe ụfọdụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi ugbu a ma nwee ike ife efe. Iji mee nke a, ha chọrọ ngbanwe anatomi dị iche iche iji wee kwe ka ogwe aka na aka ha gbapụ.
Anyị ga-azụlite n'ụzọ miri emi karị anumanu niile nke Triassic.
Anụmanụ Triassic Terrestrial
N'ime usoro okike ndị a, ọtụtụ anụmanụ dị iche iche nwere njirimara pụrụ iche mepụtara: anụ na-eri anụ na dinosaurs.
Anụ ndị na-akpụ akpụ ụmụ anụmanụ
A mara otu a site na aha thepsids. N'akụkụ anụ ahụ anyị nwere ike ịhụ anụmanụ ndị a bụ ngwakọ n'etiti nkịta na ngwere. Aka ha na-adị ogologo ma e jiri ya tụnyere akụkụ ahụ ndị ọzọ mana ha nwere ọdụ dị mkpụmkpụ. Ezé ahụ nwere ụdị ọdịdị dị iche iche dabere na nri nke ụdị ọ bụla. Mgbe nri bụkarị viper, anyị nwere ike ịhụ na ezé mepụtara ezé site na omume. Na molars bụ ihe bara uru na-enwe ike-azọpịa osisi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na nri ahụ bụ anụ na-eri anụ, ị pụrụ ịhụ a ka mma mmepe nke okporo ụzọ na ezé onye na-egbu anụ.
A na-eche na dinosaurs pụtara n'oge a niile. N'etiti ndị dinosaurs na-anọchi anya anyị, anyị na-ahụ prosauropods na theropods. Anyị ga-enyocha ha n'ụzọ zuru ezu.
Ha bụ anụmanụ ndị nwere nnukwu olu ma nwee ogologo olu. Ogologo ya adịghị ka nke ahịhịa ndụ nke dịrị ndụ n'oge Jurassic. Ndị ụkwụ ya na-etolitebeghị ka azụ ya. N'ime prosauropods enwere ụfọdụ nkewa gbasara ụdị. Ndị kachasị bụrụ Mussaurus na Sellosaurus.
Ha bụ ndị otu dinosaurs ndị ọzọ pụtara ìhè n'oge a. Ọ bụ otu anụ ọhịa na-eri anụ dinosaurs. N'etiti njirimara ya bụ isi anyị na-ahụ pipet gait na ihu ala na-emepebeghị emepe. Ogo nke ụdị ndị a dịgasị iche dabere na gburugburu ebe obibi ha ebe a ga-ahụ ha. Ka mgbanwe ụmụ anụmanụ na-ebute tupu e kpochapụ ọtụtụ mmadụ, mgbanwe mkpụrụ ndụ ihe nketa na-ewere ọnọdụ na oke ọsọ. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na gburugburu agbanwere mgbanwe n'oge ahụ nakwa na ahịhịa ahụ nwekwara mmepe nke ya.
Fọdụ ụdị nke theropods Ha agafeghị mita ahụ ebe ndị ọzọ nwere ike iru mita iri na abụọ. Fọdụ n’ime ụdị ahịhịa ndị a kacha mara amara bụ Tawa na Euroraptor.
Aquatic Triassic anụmanụ
Na aquatic gburugburu ebe obibi, invertebrates mepụtara tumadi. Mollusks nọchiri anya ha nke gastropods, bivalves na cephalopods pụtara. Ralsfọdụ coral mekwara n’elu mmiri.
A na-akpụ ụdị mmiri a na-akpụ akpụ na mmiri n'oge a. Notosaurus nwere na ichthyosaurs kwụpụrụ. Banyere ihe ndị na-akpụ akpụ n’eluigwe, e nwekwara otu ụdị anụ na-akpụ akpụ nke mepụtara nke ọma n’ihe banyere ndị ọzọ. Ma ọ bụ na ha nwere ike iwepụta ụdị mpempe akwụkwọ sitere na akpati ya ruo na nsọtụ elu ya. Aka ya ndị a mere ka ọ nwee ike ife efe. N'ime otu a bụ Pterosaurs ndị nwere mmanu ma nwee ọnụ ọnụ ogologo. Nri ha bụ anụ na-eri anụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Triassic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Anụmanụ Triassic